निशानको बिहे तर अ’चानक! भा’वुक हुँदै युवती मिडियामा “I love you निशान बिहे हुदैमा माया घ’ट्दैन” बिहेको फोटो देख्दा मुटु दु’ख्यो, आखिर के थियोे त! (भिडियो हेर्नुहोस) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/निशानको बिहे तर अ’चानक! भा’वुक हुँदै युवती मिडियामा “I love you निशान बिहे हुदैमा माया घ’ट्दैन” बिहेको फोटो देख्दा मुटु दु’ख्यो, आखिर के थियोे त! (भिडियो हेर्नुहोस)
भारतीय पत्रकारहरुलाई पत्रकार रुपनीको चेतावनी, नेपाललाई पाकिस्तान सम्झने भुल नगर (भिडियो)
टीका सानू र कृष्ण कंडेल बिच चर्काचर्की , भिडियो बन्यो भाइरल ( हेर्नुहोस् )
हेर्नुहोस्,अन्तिम मा नबराज नाचेको भिडियो भेटियो।
लाखौ पैसाको लागि आफ्नै आमाको ८० बर्षिय अमेरिकीसंग बिहे गराएर यस्तोसम्म गरे(भिडियो)